ဈေးရောင်းပွဲ အစီအစဉ် အားနည်းချက် လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင် တောင်းပန် | ဧရာဝတီ
နန်းဆိုင်နွမ်| November 5, 2012 | Hits:3,851
3 | | နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်ရှေ့တွင် လူများကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသည့် မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဂျွန်ချစ်ငြိမ်း [တောင်ကြီး])
လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်၏ မဟာအထူးလျှော့ ဈေးရောင်းပွဲတော်၏ အစီအစဉ် အားနည်းချက်များကြောင့် ဖုန်းဝယ်ယူလိုသူများနှင့် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်များကို ယာယီ ပိတ်ထားလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မကွေးမြို့ရှိ ဖုန်းဆိုင်များတွင် Samsung Mini ဖုန်းတလုံးကို မဟာလျှော့ဈေး အဖြစ် တလုံး ကျပ် ၅ ထောင်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဆိုသည့် ကြေညာချက်ကြောင့် လာရောက်ဝယ်သူ များပြားလာပြီး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးရန်နိုင်စိုးမြင့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ကြေညာချက် အားနည်းလို့ ဖြစ်တာပါ။ စားသုံးသူတွေကို တောင်းပန်ပါ တယ်။ စားသုံးသူတွေက အဲဒီလောက်အထိ များမယ်လို့ မျှော်လင့် မထားတာလည်း ပါတာပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
မဟာ အထူးလျှော့ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲမှ ၉ နာရီအထိ လူကြီးမင်း ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁၁ ဆိုင်တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုကင် စနစ်ဖြင့် ကံစမ်းမဲဖောက် ရောင်းချပေးမည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထုတ်ပြန် ထားခဲ့ကြောင်း၊ ၀ယ်လိုအားသည် ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာကာ လုံခြုံရေးရဲများပင် ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးရသည် အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ရ၍ ၎င်းအစီအစဉ်ဖြင့် ဖုန်းရောင်းချခြင်းကို ရန်ကုန်တွင် မည်သည့်ဆိုင်တွင်မှ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
စားသုံးသူတချို့သည် မဟာအထူးလျှော့ဈေးကို အလွန် စိတ်ဝင်စားသည့်အတွက် နံနက် ၄ နာရီမှ စတင်ကာ တိုကင်ယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြကြောင်း၊ တိုကင်ပေးမည့် အချိန်တွင် ဆိုင်ရှေ့၌ လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ရှိလာကြောင်း၊ တိုကင်ရရှိရေး တိုးဝှေ့ကာ တဦးနှင့် တဦး တိုးတိုက်ထိခိုက်မိကြပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဆိုင်များကို ခဲနှင့်ပေါက်ခြင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်ကို ရိုက်ချိုးခြင်း စသည့် အခြေအနေများသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ သည့် လသာမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူ အမျိုးသမီး တဦးက ဆိုသည်။ အလားတူ အဖြစ်အပျက်များမှာ လူကြီးမင်း ဆိုင်ခွဲ ၁၁ ဆိုင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်မှ ဒါရိုက်တာ ကိုပြည့်စုံထွန်းက “ကျနော်တို့ ခန့်မှန်း ထားတာက မြို့တွေအားလုံးမှာ ဖုန်းအလုံးရေ ၁၂၀ ပဲခန့်မှန်းတာ။ အဲဒီလောက်အထိ များလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။ ဒါလည်း ကျနော်တို့ဘက်က လိုအပ်ချက်တွေပါ။ နောက်နောင် ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဒီဖြစ်စဉ်က အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ယမန်နေ့က Park Royal ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသည့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖုန်းဟန်းဆက် တလုံးလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ ဖြင့် ကံစမ်း ရောင်းချပေးခြင်းကို ရန်ကုန်တွင် ပါရမီရှိ ဆိုင်ခွဲ တဆိုင်၌သာ ယခုတပတ် အတွင်း ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်ဆိုင်များတွင် တခြားအစီအစဉ် သစ်များ ထည့်သွင်းကာပြု ဆက်လက်ရောင်းချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် Samsung Mini ဟန်းဆက် တလုံးကို ပုံမှန်ဈေး ကျပ် ၁၂၀၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်မှု အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီအတွက် အရေးကြီး
ကချင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် သုံးဦး ဖောက်ခွဲမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ
7 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ရာဇာ November 5, 2012 - 7:49 pm	ဒီလောက်ဈေးကွာ နေမှတော့ တိုးပြီပေါ့…နောက်ပြီး ကျပ် ၅ ထောင်ဆိုတာ လူတိုင်းဝယ်နိုင်တဲ့ ဈေးလေ….အစကတဲ က ကြိုတင်စဉ်းစား ပြီးမှ လုပ်သင့်တာပေါ့….ဆိုင်ကို မီးမရှို့သွားတာ ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်….လုပ်ချင်ရင်လဲ ဆိုင်မှာ ပုံမှန် ဖုံးလာဝယ်တဲ့ သူတွေကို ကံစမ်းမဲ ကူပွန်ပေးလိုက်ရင် ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး….နံမည်ကြီးချင် လို့ သက်သက်စတန့်ထွင် တာလားမသိ….မပြောနိုင်ဘူးနော်….ဘာဘဲ ပြောပြော အခုတော့ နံမည်ကြီး သွားတာကတော့ အမြတ်ဘဲ….ဖုံးကတော့ ကျပ် ၅ ထောင် နဲ့ ရောင်းပေးတော့ မယ် မထင်ဘူး.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 6, 2012 - 3:19 am	မှန်တာတွေ သိပ်မပြောနဲ့။ သူတို့က လူတွေကို အရူးလုပ် စတန့်ထွင်တာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပေးသွားမယ်။ အစကတည်းက သည်လောက် ဈေးကွာတာ၊ သည်လိုတွေ ဖြစ်ပြီး မရောင်းပဲ ရပ်လိုက်မှာ မြင်သားပဲ။ လူတွေကို သက်သက် ဒုက္ခ ပေးတာ။ ဆိုင်ကို မီးမရှို့တာ သူတို့ အတွက် ၀မ်းမသာပေမယ့် ဘေးအိမ်တွေ ဆိုင်တွေ ကံကြီးပေလို့ပေါ့။
Reply	aungaung November 5, 2012 - 9:30 pm	မင်းတို့ပြောမှပဲ စားသုံးသူ ဖြစ်သွားတယ် ဖုန်းက ဖုန်းကစားစရာပေါ့
Reply	Maung Maung November 5, 2012 - 9:52 pm	ဖုန်းတလုံး ၅၀၀၀ ကျပ်ဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ သူတောင်းစား တောင် ၀ယ်နိုင်တယ်။ လူဒီလောက်များလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့လို့ပါ ဆိုတဲ့စကား ဘယ်လိုယုံရမလည်း။ မင်းတို့လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်က လူတွေကို အူကြောင်ကြောင်ဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ပြီးဟာသလုပ်တာမဟုတ်လား။ မဟုတ်မဟတ်တွေ လုပ်ပြီး တောင်းပန်တာကတော့ ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီး ကန်တော့ ကန်တော့ လုပ်တာပဲ။ မင်းတို့ဆိုင်တွေကို ခဲနဲ့ပေါက်တာထက် မီးတင်ရှို့ပစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီကောင်တွေ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး တောင်းပန်သယောင်ယောင်နဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဖုန်းဝယ်ဖို့လာတဲ့လူတွေကို ရယ်ပြီး လှောင်နေမှာသေချာတယ်။အဲဒီအစားဖုန်းအလုံးရေ တစ်သောင်း ကို ကျပ် ၅၀၀၀နဲ့ရောင်းခိုင်း မရောင်းပေးရင် အဲဒီဆိုင်တွေ အကုန်မြေလှန်ပစ်။ စားသုံးသူတွေကို စော်ကားတဲ့ကောင်တွေ မှတ်လောက်
Reply	MTK November 5, 2012 - 11:52 pm	Pls don’t makeatrick and treat to our people like the old policy in market. Today you need to make your business straight and open. Don’t lie our people again and again. Next time don’t throw with stones, cause and get fire the office.
Reply	dadaoo69 November 6, 2012 - 12:24 am	မဖြစ်နိုင်တာကို လုပ်တာ ညာတာပါပဲ ။ စော်ကားတာပါ ။ ကလေးသိ ခွေးသိ ။ တကယ်ရစေချင်တာထက် ပျက်နေတဲ့နံမယ် အဖတ်ဆည်ဘ်ိ့ကြိုးစားတာပါ ။ဖုံးဘို့ ကုန်းကာမှ အလုံးလိုက်ပေါ် ။
Reply	star November 6, 2012 - 7:40 am	This is the means of doing business